Guddiga Fulinta oo Shiray & Kaabineega iyo Baarlamaanka Kililka 5aad oo Bari Shiri Doona - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Guddiga Fulinta oo Shiray & Kaabineega iyo Baarlamaanka Kililka 5aad oo Bari Shiri Doona
Published on Friday, 26 July 2013 21:58	Xogta Shacabka (Jigjiga) Guddiga Fulinta ee SPDP ayaa galabta kulan ku yeeshay Xarunta Dhexe ee xisbiga magaalada Jigjiga, sida ay na soo gaadhsiiyeen ila wareedyo soo ag-maray goobta shirku ka socday. Inkastoo aanan helin xog rasmi ah oo ku saabsan ajandayaasha kulanka looga wada hadlay, waxay ilo lagu kalsoonyahay noo sheegeen in lagu eegayay miisaaniyada sannadka 2006-da tirsiga Ethiopia oo barrito la hor dhigi doono baarlamaanka Dagaanka.
Dhanka kale waxaa lagu soo waramayaa in barrito subax ka hor intaan ka-lfadhiga baarlamaanku furmin uu shiri doono golaha wasiirada Kililku si ay isula eegaan habka loo ja jabiyay miisaaniyada sannadka cusub, kadibna la hor geeyo baarlamaanka.
Miisaaniyadii sannadkan dhamaaday oo qorshaha xukuumadu xooga saarayay wax ka qabadka Biyaha, ayaan laga gaadhin natiijadii la filayay, laguna guulaysanin qodista ceelashii dhaa dheeraa ee la qorsheeyay in laga qodo dhulka ciida ah, inkastoo dagmooyinka qaar laga qoday baraago.
Warar aanaan xaqiijinin oo ku saabsan miisaaniyada 2006-da tirsiga Ethiopia ee Kililka 5aad ayaa sheegaya in lacagta ugu badan loo qoondeeyay dhismaha iyo dayac-tirka wadooyinka.